Canonical wuxuu ogaadaa nuglaanshaha GRUB2 | Laga soo bilaabo Linux
210 | | Laga soo bilaabo Linux, GNU / Linux, Noticias, Shabakado / Adeeg
Kuwa aan aqoon Canonical kani waa shirkad laga aasaasay Boqortooyada Ingiriiska, waxaa aasaasay oo maalgeliyay Mark Shuttleworth oo asal ahaan ka soo jeeda Koonfur Afrika. Shirkadda ayaa mas'uul ka ah sameynta barnaamijyada kombiyuutarada iyo adeegyada suuqyada u janjeedha Ubuntu, nidaamka hawlgalka Gnu / Linux iyo codsiyada ku saleysan barnaamijka bilaashka ah.
Xagga GRUB ama Bootloader GRand MidaysanWaxaan dhihi karnaa waxaa loo isticmaalaa in lagu bilaabo hal ama dhowr nidaam oo ku shaqeeya isla kombiyuutarka, waa waxa loo yaqaan maamule boot, il gebi ahaanba furan.
Hadda, waxaan ka hadli doonaa arrimaha Dayacnaanta Zero-Day gudaha GRUB2. Tan waxaa markii ugu horreysay helay Ismael Ripoll iyo Hector Marco, oo ah laba horumariye oo ka socda Jaamacadda Valencia ee Spain. Asal ahaan waa si xun u isticmaalka furaha tirtirka, marka qaabeynta kabaha la hirgeliyo amniga lambarka sirta ah. Waa adeegsiga khaldan ee iskudhafka kumbuyuutarka, halkaasoo riixaya fure kasta uu dhaafi karo gelitaanka lambarka sirta ah. Dhibaatadani waxay ku kooban tahay xirmooyinka kheyraad oo sida muuqata waxay ka dhigayaan macluumaadka ku kaydsan kombuyuutarka kuwo aad u nugul.
Marka laga hadlayo Ubuntu, dhowr nooc ayaa soo bandhigaya cilladda nuglaanta, sida qeybinta badan oo ku saleysan.
Noocyada ay saameysay Ubuntu waxaan haynaa:
Dhibaatada waxaa lagu sixi karaa adoo cusbooneysiinaya nidaamka noocyada xirmooyinka soo socda:
Ubuntu 15.10: grub2-caadi a 2.02 ~ beta2-29ubuntu0.2
Ubuntu 15.04: grub2-caadi a 2.02 ~ beta2-22ubuntu1.4
Ubuntu 14.04 LTS: grub2-caadi a 2.02 ~ beta2-9ubuntu1.6
Ubuntu 12.04 LTS: grub2-caadi a 1.99-21ubuntu 3.19
Cusboonaysiinta kadib, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo bilaabo kumbuyuutarka si loo sameeyo dhammaan isbeddelada ku habboon.
Xusuusnow in u nuglaantaan loo adeegsan karo in laga gudbo erayga sirta ah ee GRUB, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso cusboonaysiinta si aad naftaada u ilaaliso
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » Canonical wuxuu ogaadaa nuglaanshaha GRUB2
Si ka duwan Windows iyo OS x halkaasoo khaladaadkan lagu saxo sanado gudahood [http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/02/12/microsoft-corrige-falla-critica-en-windows-15-anos - ka dib], u nuglaanshaha GNU / Linux waxaa lagu hagaajiyaa daqiiqado ama saacado gudahood (waxay hagaajiyeen oo keliya ka dib markay ogaadeen nuglaanta)
Waxay umuuqataa inaadan xitaa aqrinin isku xirkaaga.
Jilicsanaanta ayaa jirtay 15 sano, laakiin waxaa la ogaaday 1 sano ka hor.
In Linux sidoo kale waxaa jiray nuglaansho qarsoon muddo tobanaan sano ah, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in wacdinta ay hubisay in nuglaanta si dhakhso ah ama dhakhso leh loo ogaaday sababta oo ah isha ayaa furan.
Isla markii la soo sheegay nuglaanta, Microsoft waxay bilowday inay ka shaqeyso xal si gaabis ah u soo baxa iyadoo ay ugu wacan tahay kakanaanta xalka aaminka ah ee wax ku oolka ah iyo tijaabooyinka, mana jirin wax deg deg ah maadaama aan lagu ogeyn kuwa wax weeraraya.
In wax si dhakhso leh loo hagaajiyaa kaliya waxay ka dhigan tahay in samaynta balastarku aysan ahayn mid murugsan ama aan QA la isticmaalin markii la sii daayo wixii koodh ah ee isbeddelaya, wax intaas ka badan ma jiraan.
Laakiin kaniisaddu ma aysan daahin wax ... .. Kaliya waxay ku dhacaysaa waxtarkooda wax kale
Fadlan sax cinwaankaas maadaama ay been weyn tahay ... been wararka xaqiiqda ah iyo been ku jira maqaalka ...
Jilicsanaan ayaa laga ogaadey GRUB, laakiin Canonical waxba kuma laha. Jilicsanaantaani waxay saameyneysaa qaybinta Linux oo kale ah, ma ahan oo keliya Ubuntu.
Marka laga hadlayo asalka, u nuglaanta noocan oo kale ah ma ahan mid qatar ah, maaddaama adeegsiga erayga sirta ah ee GRUB ay ammaan tahay sida isticmaalka lambarka sirta ah ee BIOS. Haddii isticmaaluhu doonayo nabadgelyo, waxay si cad u yeelan doonaan lambarka sirta ah ee isticmaalaha iyo kaydinta diskka (haddii ay dhacdo in weeraryahanku marin u helo qalabka).
Tani ma noqon doonto wax ka badan sheeko xariir ah.
Ma aha sida ugu fudud ee aad rabto inaad rumaysato.
Halkan waxay ku sharaxayaan wax yar sababta furaha sirtu muhiim ugu yahay GRUB iyo in aanu ku xalinaynin furaha isticmaalaha ama sirta waxyaabaha.
Markasta oo wax ku dhacaan Linux, isla markiiba waa la qiimeeyaa marka hore kadibna waa la ilaawaa.
PS: miyay adkeeyeen faafreebka ku jira desdelinux in faallooyinka aysan mar dambe soo muuqan marka la dirayo?.
waa maxay?. Waad aqrisay gelitaanka ay xigashooyinkaaga ... uusan waxba ka oran sirta disk-ka ama erayga isticmaale, kaliya wuxuu sharxayaa waxa loogu talagalay iyo sida loo adeegsado furaha 'GRUB2' ... Waxay sidoo kale xaqiijineysaa inay tahay inaad marin u hesho qalab lagu xadgudbo amniga kooxda (waxaa jira habab kale oo badan oo wax ku ool ah marka loo eego GRUB ...)
Iyo wax kasta oo aad uhesho maamule ahaan iyada oo loo marayo GRUB, haddii aad haysato rukhsadaha jajabyada, furayaasha isticmaaleyaasha iyo sirta LUKS oo si fiican u dhisan (iyo waxyaabo kale), ma heli doonaan xogtaada (haddii ay marin u leeyihiin qalabkaaga dabcan ).
Sidaa darteed, weli ma arko ujeedka. (Ilaa aad ku kalsoon tahay oo keliya lambarka sirta ah ee GRUB si loo ilaaliyo xogtaada).
Jawaabtaada cusub waxaad ku xaqiijineysaa inaadan arkin macnaha dhibaatada maxaa yeelay waxaad tahay qof fudud oo xitaa ma qiyaasi kartid fursado fudud oo ka jira farqigaas.
Dabcan waan aqriyay, laakiin sidoo kale waan fahmay.
Ama waxaa laga yaabaa inay tahay inaan ogaan karo saameynta iyo baaxadda furitaanka farqiga kasta.
Farqiga uunan meesha oollin, farqiga u dhexeeya hab farsameedka amniga oo wax u jiray.
Haddii aad akhriso xiriiriyaha waxaad ogaan doontaa in maadaama loginkan amniga uu yahay mid laga boodi karo ay suurtagal tahay in nidaamka loo helo asal ahaan, kaas oo lambarkaaga sirta ah ee isticmaala uusan waxba ahayn. Hadana haddii aad wax ka ogtahay waxaad ka faaloonaysid, waa inaanan sharax ka bixin marka aad gasho asalka inay suurta gal tahay inaad eegto ama aad wax ka bedesho qashinka sirta ah, aad wax ka beddesho isticmaaleyaasha, wax ka beddelo nidaamka lagu rakibo ama lagu beddelo hababka la socda dhammaan isticmaalaha hawl marka la xaqiijiyo. taasi waxay ka bixi kartaa qabsashada furahooda sirta ah ilaa qaadashada xogtooda la duubay oo ay u diraan dhammaan "guriga"; ka mid ah kumanaan waxyaalood oo kale oo ku dhici kara weeraryahan ka aqoon badan dadka adiga oo kale ah ee ku nool goobooyin lagu qanco, amni been ah iyo "weligood ma guuleysan doonaan haddii aad si fiican u dhisto bla bla bla."
Sababtoo ah inaadan ka fikiri karin waxyaabo micnaheedu maahan inaadan waxba qaban karin.
Sidoo kale dhib malahan in ay jiraan habab badan oo "wax ku ool ah", dhibka jira ayaa ah in hada uu jiro hal dariiqo oo dheeri ah, oo ah in aysan jirin dartiis.
Waana hab aad loo heli karo oo fudud, oo lagu qiimeeyo dadka qiimeeya dayacanka.
Mar dambe uma baahnid Livecds, USB-yada, furo BIOS, sanduuqyada furan, ka saar darawallada adag, rido darawalada dibadda, iwm; kaliya istaag kumbuyuutarka hortiisa oo taabo ONE key.
Oo ha ka welwelin, in berrito markii warku sheegayo in super LUKS-kaaga maanta uu leeyahay u nuglaansho, dadka adiga oo kale ah ayaa u soo bixi doona inay dhahaan "nin dhab ah oo reer Scotsman ah" kuma kalsoonaanno qarinta diskka laakiin waxyaabo kale (sida GRUB xitaa)
PS: wax ka beddel css ee xigashooyinka oo ah HUGE.
Dabcan …. badanaa cinwaan: "Canonical wuxuu ogaadaa nuglaanta GRUB2." Oo maxaa hab lagu qoraa wararka. Warkan marka uu dhamaado waxay umuuqataa in Canonical / Ubuntu ay yihiin kuwa kaliya ee wax u qabta barnaamijyada bilaashka ah. Xirmada waxaa haysa colin watson oo loogu talagalay Debian, oo si kadis ah ugu soo rartay Ubuntu, sida ku cad nooca xirmada. Mana jiro wax faallo ah oo ku saabsan sida nuglaanta loo kiciyay, taas oo ah adigoo riixaya furaha dhabarka 28 jeer.
Waxa aniga igu canaanan karo waa in la faalleeyay, iyo jidka mar walba iyo mar kale, in nuglaanta ay sabab u tahay "si khaldan u isticmaalida kumbuyuutarka." Taasi waxay u egtahay: "waxay ku hayaan iPhone khalad."
Maya, u nuglaanta waxaa sababa barnaamij xumo, sida had iyo jeerba, muddo. Waa cudurdaar la’aan in riixitaanka X jeer furaha uu ka boodo soo galitaanka amniga.
Muxuu cinwaan u yahay, waxay kaloo dhihi doonaan inta grub bilaabay qalad la ogaaday inuu riixayo "e", sidoo kale waxaan isku dayay lint mint iyo wax ku dhaca kaliya ubuntu.
PS: marka hore waa inay soo galaan gurigeyga si ay u adeegsadaan ishaas nuglaanta ah marka hore tirtir reexaanta oo rakibo ubuntu.
Higgaadintaadu waxay ka tagaysaa waxyaabo badan oo la doonayo
Jilicsanaanta deegaanka ayaa u nugul gebi ahaanba.
Goobaha shaqada, shirkadaha iyo bey'adaha kale ee muhiimka ah kuma qosli doonaan inay yeeshaan baylahnimadan iyo in ka sii badanba iyagoo adeegsanaya "Linux ammaan ah". Laakiin sifiican ayaan u ciyaaraa maxaa yeelay gurigaaga ma soo galaan.
E sidoo kale waa khatar ay tahay in la xannibo. Ma ogi hadaad ogtahay.
Hahaha Paco22, sidee u difaaceysaa nuglaantaan ...
I aamin aamin in shirkad culus ay jiraan borotokoollo amni oo fara badan oo a) marin loogu helo aaladda jirka b) si loo ilaaliyo helitaanka xogta.
Hadana haddii xiisahaagu wali yahay GRUB, way fududahay in la xakameeyo si aanad marin ugu helin ...
Su'aal ma ahan in "runti dhab ah oo reer Scotland ah" uu adeegsan doono borotokoollo kale oo nabadgelyo, laakiin in kani yahay mid ka mid ah hab-maamuuskaas oo WAA FASHILAN, muddo. Iyo dhacdo ahaan, haddii aad ku guuldareysato inay wax u dhimayso inta hartay, sida kuwa aad sheegtay, adigoo ku dhaaranaya inay yihiin dammaanadda ugu badan.
Jilicsanaantaani uma baahna inaan difaaco, maxaa yeelay waxaa daah furay oo aqoon u leh khabiiro aqoon u leh amniga iyo qiime dhaca wannaaga ayaa fahamsan inay wax badan ogyihiin iyadoo la adeegsanayo qalabka loo yaqaan 'distro'.
Waan fahamsanahay inay iyaga waxyeello u tahay in yar yar oo quraafaad ah "ammaan ammaan ah" lagu kala tagayo, xitaa adigoo hal key furaya.
Caadi ahaan, waligood isma beddelaan, had iyo jeer waa isku mid si loo yareeyo cilladaha superlinux.
ninku kuma noola Ubuntu oo keliya
Kodi 16 "Jarvis" oo la hagaajiyay